Ziziphi iimbuzo ezibucayi ezibuzwa ngabafana
Ngamanye amaxesha, ukusuka kwimpendulo yombuzo olula, unokufunda okungakumbi ngomntu kunokuba unxibelelwano lweenyanga. Ngaba ufuna ukwazi izinto ezibuqilileyo imibuzo yabantwana bentombazana yokubuza ukukhetha uphawu lwazo, iimfuno ezinzulu, iimpawu zokomoya? Nazi ezilishumi imibuzo ebaluleke kakhulu ukusuka kwinqanaba leembono zengqondo kunye neempendulo kwiimpendulo kubo. Okubaluleke kakhulu - unganqikazi ukubabuza! Kungcono ukuququzelela uvavanyo lokuhambelana nokudlala okanye indlela yokuzonwabisa. Umoya ongenakunqunywanga unobungqina obukhulu kunye nokunyaniseka ekunxibelelaneni.
Umfana ubonisa njani intombazana yamaphupha akhe, obani angathanda ukuba nabantwana kwaye ngokuqinisekileyo uza kutshata?
Imibuzo yengqondo kumntu
Okokuqala, "ndakanya" umdlali weqonga kwaye udlala indima ukuze loo mntu angayikrokreli ukuba uceba ukumzingela. Buza umbuzo "ngendlela", umzekelo xa ubukela ibhayisikobho okanye uhlamba amathambo omhlobo wakho. Ukuba umntu uthetha ngezinto ezithile (umbala weenwele, iso, isifuba, ukuphakama) kwaye awuhambisani nale parameters, ngoko kuya kuba nzima ukunqoba. Mhlawumbi, musa ukuchitha ixesha. Ukuba umntu uthetha ngezinto ezingabonakaliyo (ezintle, ezinobubele, eziqilileyo), ngoko umfanekiso womfazi wakhe awunakumba kwaye unethuba elihle lokumzisa.
Yiziphi iifilimu azijongayo? Uhlobo luni lomculo ayithandayo?
Imibuzo ekhululekile kakhulu kunye nempendulo enolwazi. Akunakwenzeka ukuba umfana uzakufumana zikhohlisayo, kodwa unokuzixelela iimpendulo zakhe iimpawu zakhe. Inomdla kumculo "onzima", i-Rap, iifilimu ezihlaselayo, abantu abanomdla bathetha ngokugqithisa. Umculo kwisitayela esithi "Enigma", i-jazz, i-classic, i-fantasy, i-fantasy ingqina kwiingcamango ezicebile kunye nentlangano yokomoya engcolileyo. Umculo ogqithisileyo, ama-comedies, i-melodramas ibonisa umbala ovulekileyo, onokuvuya. Kwaye njalo.
Le nkwenkwe icinga ukuba yintoni eyona nto intsapho? Ngubani owenza imali? Ngubani ojongene nokukhulisa abantwana?
Imibuzo ebalulekileyo, iimpendulo eziza kubonisa isakhiwo esizayo kwintsapho. Kule meko, akukho zimpendulo ezilungileyo okanye ezimbi. Kubalulekile ukuba iimbono zakho zihambelane, ngoko kuya kuba neenkqubela ezintsapho ezincinane.
Uhlobo luni lomgaqo umntu onesihawu?
Abaninzi banqwenela ukumbamba kwezopolitiko. Ngoko, emva kwalo mbuzo (ingakumbi ukuba uyayiphulaphula ngokucophelela), uyakuhlonipha. Ewe, iimpawu ezibonakalayo kumgaqo-nkqubo okhethiweyo, mhlawumbi, zihambelana nalo mfana.
Uvakalelwa njani, kufuneka ukuba amalingani olwabelana ngesondo abe njani ubomi?
Ukuba akafuni ukuphendula lo mbuzo okhohlakeleyo, ngoko uyindoda ebuswe kakuhle. Ukuba iphendula, ithetha ukuba ungathembela, okanye ungayithathi ngokungathí sina. Amanani athile achaza malunga nomsebenzi wakhe wesondo.
Yintoni loo nto ithetha ngetyala? Ngaba ucinga ngokuthandana komzimba ngaphandle kothando?
Kukho abantu (mhlawumbi unabo kubo), ngubani ovumela ulwalamano olukhululekile, ukuvumela iqabane ukuba libe nobuhlobo bobulili kwicala. Kumntu, ukugwenxa kuyisenzo sokugawula igazi. Kufuneka ubeke amachaphaza phezu kwe "i".
Nguwuphi umsebenzi owuthandayo?
Imibuzo enjalo elula, kodwa ekhohlisayo iyabuza. Ngokomzekelo, umntu onomdla unomdla ngakumbi ebomini. Ewe, kwaye izinto zokuzilibazisa zihluke, ukuchitha ixesha kunye nokubandakanya inkcitho yemali. Kodwa kuninzi ngakumbi, ukuba umntu akhathalele oko akwenzayo, akanalo izinto ezithandwayo kunye nezinto ezithandwayo. Kuya kuba ngumhlobo ocebisayo ebomini.
Uphupha ntoni? Iyintoni intsingiselo yobomi bakho?
Ububanzi beephupha bubonisa izinga lokuzifunela. Ukuba umntu uphupha u-Everest okanye uyakuba ngumongameli, ke unomdla kwaye unenjongo. Mhlawumbi, ukuzinza kwezemali kuya kufezwa, kodwa kwindleko yobudlelwane bosapho. Kwaye umntu obalulekileyo - unqwenela phambili, kodwa usapho olunamandla.
Lubuphi ubuhlobo bomntu kunye nabazali bakhe?
Kakade, umntu akahlali ecela imibuzo embi. Lo mbuzo ulula kakhulu, kodwa ulwazisa kakhulu. Ukuba intsapho ilwalamano oluhle kunye nomfana, abazali bahlala kunye kunye nothando, ukuba umntu uyabahlonela abazali bakhe, ngoko uya kwenza umyeni omhle.
Ngaba uyayithanda imfuyo?
Ukuba umntu uyayithanda izilwanyana, oko kukuphawu oluhle. Ukuba akayithandi izilwanyana, unokuthanda abantwana? Kule ngxaki, ubudlelwane bexesha elizayo kumakhaya bufihliwe. Ukususela kumntu ongenamdla kuya kuba nzima ukulindela iimvakalelo ezinyanisekileyo.
Iingcamango zesini zesini zesini
Unokuthatha isigqibo malunga nomntwana oneminyaka engama-40 ubudala
Ukuguquka njengenye yeentlobo zeengxabano
Yintoni uWannabe? Ukuphefumlelwa kweyona nto
Yintoni ukunganakwa kunye nendlela yokuphuma kweli lizwe?
Kuthekani ukuba loo ndoda ayinayo intsapho?
Iigquke ze-cupcakes kunye nokuzaliswa kwe-chocolate kunye ne-ukhilimu
Basma ngeenwele: zokupheka zokubala emakhaya
Ukunyanzeleka okukhawulezayo: ihlobo lehlobo ejongene nokunyamekela kwesikhumba uKhanel Hydra Beauty
U-Olga Buzova amaphupha okulungiselela indlela yakhe yokubonakalisa iFesto eRome
Ukukhanyisa kwigumbi labantwana
Izifundo ezithoba zokunqoba umntu?
Yintoni ozakujonga xa ukhetha umatshini wokuhlamba
Ukujongana nokunyamekela emva kokukhangela imichiza
Ingulube kunye namazambane kwi-multivariate
Burgers nge-bacon kunye nama-mushroom
Ukulungisa iingxaki zengxabano emsebenzini
Yintoni eya kutshintsha ubomi xa amaqanda ephupha
Umvuzo "Umsila wePiacock"